Catmint - Nepeta အတွက်ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ဂရုစိုက်ခြင်း - ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ
Catmint - Nepeta အတွက်ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ဂရုစိုက်ခြင်း
ဤမျှလောက်များစွာသော catmint မျိုးကွဲ, ဤမျှလောက်အချိန်! ဥရောပနှင့်အာရှတွင်နီပါတာမျိုးစိတ်ပေါင်း ၂၅၀ ကျော်ရှိသည်။ သို့သော်ယင်းတို့ထဲမှအနည်းငယ်မျှသာဥယျာဉ်မှူး၏စာရင်းကိုမဖြစ်မနေတင်ရမည်။ catnip အပင်အများစုသည်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထုပ်ပိုးထားသောအစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်မီးခိုးရောင် - အစိမ်းရောင်အရွက်များသောအရွက်များ၊ အပြာရောင်၊ လာဗင်ဒါ၊ အဖြူရောင်နှင့်အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့အရောင်များဖြင့်တောက်ပသောကြက်ညှာပန်းများထွက်လာသည်။
catmint နှင့် catnip အကြားခြားနားချက်ရှိပါသလား။
ဘုံအမည် (များ) Catmint, Catnip, Catnep, Catswort, Field balm
မူလ ဥရောပ၊ အာရှ
အမြင့် 20-39 လက်မ
အပူချိန် သစ်ပင်များအတွက်, အချိန်မရွေးနောက်ဆုံးနှင်းခဲပြီးနောက်
မြေဆီလွှာ ကောင်းစွာ - ယိုစီး, အခြားအမျိုးအစားများကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်
ဓာတ်မြေသြဇာ ဆွေး, မဟုတ်ရင်အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ခဲ့သည်
ဝါဒဖြန့် ဌာနခွဲ, ရှ, ဒါမှမဟုတ်အမျိုးအနွယ်ကိုမှ
ပိုးမွှား ကြောင်များ (တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး)
Nepeta racemosa 'Walker's Low', 'Walkers Low'
နီပါတာ 'Walker's Low'
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်“ နှစ်တစ်နှစ်တာနှစ်” ဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပြီးအကျော်ကြားဆုံးသောကြောင်အပင်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သောနီပါတာ Walkers နိမ့် မေလလယ်မှစက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းအထိစိမ်းလန်းသောအစိမ်းရောင်အရွက်များအထက်တွင်ပေါ်နေသောစိမ်းပြာရောင်ပန်းပွင့်များစွာရှိသည်။ ဤ catmint အပင်များသည်မြေပြင်မှပန်းပွင့်မှအမြင့် ၃၀ လက်မအထိအလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်ပြီးအကျယ် ၃၆-၄၀ လက်မရှိသည်။
Racemosa မျိုးကွဲအားလုံးသည်အစိမ်းရောင်သစ်ရွက်များရှိသော်လည်းပန်းပွင့်သည် varietal နှင့်ပြောင်းလဲသည်။ အချို့သောအခြားဥပမာများပါဝင်သည် 'Little Titch' (purpleပြီမှသြဂုတ်လအထိခရမ်းရောင် - အပြာရောင်ကြက်ညှာပန်းများ)၊ 'Blue Ice' (မေလအစောပိုင်းမှစက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းအထိအလွန်ဖျော့ဖျော့ဖျော့ပန်းများနှင့်) 'ထိပ်တန်း' (ဇွန်လအစောပိုင်းမှစက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းမှစစ်မှန်သောလာဗင်ဒါပန်းပွင့်) ။ မျိုးကွဲလည်းရှိပါတယ် 'Little Walker' ၁၆ လက်မရှည်သော Walkers Low ဗားရှင်းဖြစ်သည်။
Walker ရဲ့အနိမ့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, ‘ Kit ကြောင် ' သေးငယ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ရှစ်လက်မခန့်သာကြီးထွားသောဤထောင်ပြီးမျိုးစိတ်သည်အလျား ၂၀ လက်မသို့အလွယ်တကူပျံ့နှံ့နိုင်သည်။ ဇွန်လလယ်မှစက်တင်ဘာလလယ်အထိလာဗင်ရောင်ပြာသောပန်းပွင့်များထွက်နိုင်သည်။
Catmint nepeta x faassenii တွင်ရရှိနိုင်သည့်အခြားမျိုးကွဲများရှိသည်။ အများဆုံးတီထွင်ဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်သည် 'Select Blue' မေလနှောင်းပိုင်းမှစက်တင်ဘာလလယ်အထိဖုန်ထူသောအစိမ်းရောင်အပင်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ 'Blue Wonder' နှင့် 'White Wonder' နှစ်မျိုးလုံးသည်ရံဖန်ရံခါတွင် racemosa မျိုးကွဲများအဖြစ်အပြန်အလှန်ညွှန်းဆိုကြသော်လည်းဤအမျိုးအစားတွင်ပါ ၀ င်သည်။ Blue Wonder တွင်စိမ်းပြာရောင်ပန်းများရှိပြီး White Wonder ၏ပန်းများသည်အဖြူရောင်တောက်ပသောအရောင်များဖြစ်သည်။
ဒီ catnip စက်ရုံ၏ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့ပန်းပွင့်များကသာဓကတစ်ခုဖြစ်သည် 'အရုဏ်တက်ချိန်' ပုံမှန်မဟုတ်သော အနိမ့်ဆုံး ၃.၅ ပေအမြင့်ကိုရောက်ရှိပြီးပြန့်ပွားနှုန်းသည်အနည်းငယ်မြင့်သည်ထက်ဇွန်လအလယ်မှသြဂုတ်လနှောင်းပိုင်းအထိပန်းပွင့်သည်။ အရွက်သည်အရောင်အသွေးရှိသောဆွဲဆောင်မှုရှိသောပညာရှိဖြစ်သည်။
အခြားမျိုးကွဲ နီပါ အရပ်ရှည်ရှည်နမူနာဖြစ်ဆက်လက်။ အကြီးဆုံး, 'တောရိုင်းကြောင်' , အမြင့် 52 လက်မမှကြီးထွားခြင်းနှင့်ခြောက်ပေနီးပါးပြန့်ပွားအကွာအဝေးရှိပါတယ်။ ၎င်းသည်ဇွန်လလယ်မှစက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းအထိဆွဲဆောင်မှုရှိသောခရမ်းရောင်အပြာရင့်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောထားသည်။ အခြားအမျိုးပေါင်းပါဝင်သည် 'Bramdean' (ဇွန်လလယ်မှစက်တင်ဘာနှောင်းပိုင်းမှအပြာပန်းများ) နှင့် 'ရေကူးကန်' (ဇွန်လလယ်မှအောက်တိုဘာလအစောပိုင်းအထိခရမ်းရောင်ပန်းပွင့်များ)
subsessilis မျိုးကွဲများ nepeta မျိုးစုံသည်စိမ်းလန်းစိုပြေသောစိမ်းလန်းသောသစ်ရွက်များကိုပုံဖော်လေ့ရှိပြီးအပင်အများစုသည်အမြင့် ၃၀-၃၂” အကွာအဝေးတွင်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး 'Candy Cat' , subsessilis မျိုးကွဲများ၏အသေးငယ်ဆုံးတစ်ခု။ ၎င်း၏ခရမ်းရောင်ပန်းပွင့်များ၏အစွန်အဖျားသည် ၁၄ လက်မခန့်အထိရှည်လျားပြီးဇွန်လလယ်မှအောက်တိုဘာလအထိပန်းပွင့်သည်။
Nepeta subsessilis မျိုးကွဲလည်းပါဝင်သည် 'အိပ်မက်လှလှမက်ပါစေ' (ဇွန်လအစောပိုင်းမှစက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းအထိပန်းပွင့်ပန်းပွင့်များ) နှင့် 'Cool Cat' (ဇွန်လအစောပိုင်းမှအောက်တိုဘာလအထိလာဗင်ဒါပန်းများ) ။
ထူးခြားသောအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲနီပါတာမျိုးစိတ်များသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်အခြားမျိုးကွဲအနည်းငယ်မျှသာရှိသည်၊ အများစုမှာဆုရရှိသူများဖြစ်သည်။ ဤအရာနှစ်ခုရှိပါတယ် နီပါတာ 'ဂျိုနာရိဒ်' (မေလလယ်မှအောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းအထိ) ခရမ်းရောင်ပန်းပွင့်များကိုအကြီးအကျယ်ထုတ်လုပ်သူနှင့် နီပါတာ 'Six Hills Giant' (ဇွန်လအစောပိုင်းမှအောက်တိုဘာလအထိပန်းပွင့်ထုတ်လုပ်သည့်နောက်ထပ်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်ပန်းပွင့်ထုတ်လုပ်သူ) သူတို့၏ဖြူဖပ်ဖြူရော်ရောင်ပွင့်များအတွက်လည်းထင်ရှားသည် နီပါတာ 'အပြာရောင်တီးတိုး' veryပြီလနှောင်းပိုင်းမှစက်တင်ဘာလအစောပိုင်းအထိဖြူဖွေးသောပန်းပွင့်၊ နီပါတာ 'Ice Blue' (မေလအစောပိုင်းမှစက်တင်ဘာနှောင်းပိုင်းအထိအလွန်အပြာရောင်ပန်းပွင့်များ)
ဤသည်ဝေးရရှိနိုင်သည့်မျိုးပေါင်းအားလုံးထံမှဖြစ်ပါသည် - လည်းရှိပါတယ် Ukrainian nepeta , Nepeta yunnanensis နှင့်ရာပေါင်းများစွာ။ ဤရွေ့ကားရုံဥယျာဉ်ကိုအသုံးပြုမှုအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအချို့သာ။
ငါ 'catmint' နှင့် 'catnip' ဟူသောဝေါဟာရများကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်အပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးပြုနေပုံရသည်ကိုသင်သတိပြုမိပေမည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးနီပါတာမျိုးစိတ်များအတွက်ဘုံအမည်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ခြားနားချက်ရှိပါသလား။ ပြီးတော့ catnip ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ။
သင့်ရဲ့ feline သူငယ်ချင်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောပါတီ starter, နီပါတရာ (ဘုံကြက်ညှာ) သည်ကြောင်ကြောင်မူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသွားလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့မဆိုအမျိုးမျိုးသောအမှုအရာသည်ဖြစ်တော့လိမ့်မည်။
ဒါကအားလုံး nepetalactone အဖြစ်လူသိများသဘာဝ - ဖြစ်ပျက်ဓာတုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပါတယ်။ မျိုးကွဲအများစုတွင်၎င်းသည်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိရှိသည်၊ သို့သော်နီပါတရာသာယာသည်အခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားသောအချိုးအစားရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ကြောင်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် catnip တစ်ခုတည်းကိုသာကြီးထွားလာနေလျှင် Nepeta cataria သည်ပြီးပြည့်စုံသည်။
နီပါတရာ ပုံမှန်အားဖြင့်အလှဆင်ဥယျာဉ်များတွင်အသုံးပြုမှုနည်းပါးသောကြောင့်၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကြည့်နေသောရုပ်ရည်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာအရုပ်ဆိုးမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ပန်းပွင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆွဲဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကလုံးဝမှုတ်, နှင့်ရပ်ကွက်အတွင်းကြောင်လူ ဦး ရေအားဖြင့်ပတ်ပတ်လည်လှိမ့်သို့မဟုတ်တက်ဝါးခံရဖို့အတော်လေးအဖြစ်ကျရောက်နေတဲ့မဟုတ်သောအခြားနီပေါအများအပြားရှိပါတယ်။
ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ဥယျာဉ်တွင်နီပါတီမျိုးစုံမျိုးစုံထုတ်လုပ်ရန်စီစဉ်ထားပါကလှပသောအလွှာဖြင့်ကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ပန်းအရိပ်မျိုးစုံရရှိရန်စီစဉ်ထားပါကအခြားအပင်များနှင့်ဝေးရာနေရာ - နီပါနက် cataria ကိုအခြားအပင်များမှမဟာဗျူဟာကျကျနေရာချထားသင့်သည် - မဟုတ်ဘဲသင်၏ဆု flowerbed သို့ထက်။ သင်၏အပင်များကိုကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။
catnip ဘယ်မှာပေါက်သလဲ။ နေရာတိုင်းနီးပါး! ဒေသအများစုတွင်နှစ်ရှည်ခံသည်။ သငျသညျနှင်းခဲအန္တရာယ်နွေရာသီအများစုမှတဆင့်နှင့်အစောပိုင်းကျဆုံးခြင်းသို့ရှောက်သွားသည်, ကတောက်ပသောပန်းပွင့်နှင့်အတူစိုက်ပျိုးရဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုထွန်းလင်းမိနစ်နှင်းခဲအန္တရာယ်ကနေစိုက်နိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ မျိုးစေ့မှစတင်လျှင်သင်၏အပင်များကိုစတင်ရန်အတွက်ဇန်နဝါရီလသို့မဟုတ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းအိမ်တွင်းကြဲပါ။ နောက်ဆုံးနှင်းခဲခြိမ်းခြောက်မှုပြီးနောက်အပြင်ဘက်တွင်နွေ ဦး ပေါက်မှနွေ ဦး ရာသီအထိအပင်များကိုစိုက်ပါ။ ကောင်းသော root တည်ဆောက်ပုံကိုတည်ဆောက်ရန်အချိန်ရှိသောကြောင့်၎င်းကို overwinter လုပ်ရန်စီစဉ်လျှင်ပိုစောသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အညှောက်အစားထိုးခြင်းကိုရှောင်ရှားလိုပါကနောက်ဆုံးနှင်းခဲပြီးနောက်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုမျိုးစေ့ကိုညွှန်ကြားနိုင်သည်။
ဤနှစ်ရှည်ပင်များသည်အစွန်အဖျားကဲ့သို့သောအရာများသာမကကွန်တိန်နာများသို့မဟုတ်ရောနှောထားသောဥယျာဉ်များတွင်ရေပန်းစားသည်။ ၎င်းသည်ပူစီနံမိသားစု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အရပ်ရှည်ရှည်ထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားလာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်မထိန်းသိမ်းနိုင်ပါကထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ အလွန်ပူသောနွေရာသီရှိသောဒေသများတွင်နေ့လည်ခင်းအရိပ်ရသည့်နေရာကိုရွေးပါ။ အေးသောရာသီဥတုတွင်ရာသီဥတုအေးသောကာလတွင်တောင့်တင်းခိုင်မာပြီးကောင်းစွာထူထောင်နိုင်သလောက်ခဲယဉ်းသည်။
စိုက်ပါ ကောင်းစွာညှစ်ပြီးဆွေးကြွယ်ဝသောမြေဆီလွှာ , 12-24 လက်မဆိတ်ကွယ်ရာ။ အပင်ပြန့်နှံ့လာသောအခါအခြားအပင်များပတ်လည်တွင်ဖြည့်တင်းလိမ့်မည်။ ကောင်းစွာရေလောင်းပထမနှစ်တွင်အပင်ကိုသိမ်းဆည်းထားပါ။ သူတို့ကပိုဖွံ့ဖြိုးပြီးတာနဲ့သူတို့မိုးခေါင်မှုဒဏ်ခံဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
Catmint သည်နေရောင်ကိုပိုနှစ်သက်သော်လည်း၊ ရာသီဥတုပူသောနေ့များတွင်အချို့သောနေ့လည်ခင်းမှရသည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုင်သည်။
Humus ကြွယ်ဝသော ဆွေး - ပြင်ဆင်မြေဆီလွှာ ကြောင်းကောင်းစွာဖျန်သည်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ ကလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ်, ကျဆုံးခြင်းအတွက်စက်ရုံရဲ့အခြေစိုက်စခန်းန်းကျင်ဆွေးထည့်ပါ။
ပထမနှစ်စက်ရုံများအတွက်ရေမှန်မှန်ပေးရမည်။ စိုက်ထားသောအပင်များအတွက် catmint သည်မိုးခေါင်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်သို့မဟုတ်မိုးခေါင်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ရာသီဥတုအများစုတွင်ကောင်းမွန်ပါသည်။ သို့သော်ပြင်ပတွင်အေးလျှင်၎င်းသည်အမြစ်နွေးထွေးမှုအတွက်တည်ဆောက်ထားသည့်အပင်များ၏အခြေစိုက်စခန်းပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ထူထဲစွာဖုံးအုပ်ထားနိုင်သည်။ ငယ်ရွယ်သောအပင်တစ်ပင်သည်အအေးပိုင်းတွင်ကောင်းသောအရာမဟုတ်သကဲ့သို့အအေးခန်းအပူချိန်တွင်ပလပ်စတစ်အဖုံးမှအကျိုးရှိနိုင်သည်။ ကစက်ရုံရဲ့ပန်း ဦး ရစ်သရဖူကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်အဖြစ်, ဆောင်းရာသီအတွက်ဆောင်းရာသီအတွက်စက်ရုံအပေါ်သုံးစွဲသစ်ရွက် Leave ။
12-24 လက်မဆိတ်ကွယ်ရာများသောအားဖြင့်ရည်ရွယ်ထားရန်ကောင်းသောအကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအပင်များနှင့်စိုက်ပျိုးလျှင်၎င်းသည်ပျံ့နှံ့သွားလိမ့်မည်။ သို့မှသာသင်၏အခြားအပင်များကိုမကြည့်နိုင်အောင်သေချာစွာစောင့်ကြည့်ပါ။
catmint ပြန့်ပွားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကွဲပြားခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ နွေ ဦး ရာသီ၌ ၃-၄ နှစ်အရွယ်အပင်၏ဒေါင်လိုက်အပိုင်းကိုဖြတ်ရန်ဂေါ်ပြားကိုသုံးပါ။ ဌာနခွဲတွင်ငယ်ရွယ်သောအညွန့်များစွာနှင့်အမြစ်စနစ်ကောင်းရှိကြောင်းသေချာပါစေ။ ဌာနခွဲကိုပြန်လည်စိုက်ပျိုးပါ၊ ၎င်းကိုထူထောင်သည်အထိရေကောင်းရေသန့်ထားပါ။
သင်တို့သည်လည်းနွေ ဦး အတွက်ရှမှတဆင့်ပြန့်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ပန်းပွင့်ဘူးသီးများမဖွဲ့စည်းမီ၊ ကျန်းမာသောအညွန့် ၃ လက်မရှည်သောအပိုင်းပိုင်းကိုဖြတ်ပစ်ပါ။ ခုတ်ရှခြင်းကိုစိုထိုင်းသောအလယ်အလတ်အဆင့်ပေါ်ရှိသစ်ဆွေးနှင့် Perlite ရောနှောခြင်း (သို့) ကောင်းသောမြေဆီလွှာထဲသို့ထည့်ပါ။ ၂ ပတ်မှ ၃ ပတ်အတွင်းအမြစ်တွယ်သင့်သည်။
နှင်းဆီပန်းဥယျာဉ်တွင်ကြားဝင်စိုက်ပျိုးခြင်းသည်အလွန်ပင်ရေပန်းစားသည် မြေပြင်အဖုံး နှင်းဆီပင်များ၏အခြေစိုက်စခန်းနှင့်နှင်းဆီပန်း၏သစ်သားအခြေစိုက်စခန်းဖုံးလွှမ်းသောအပင်နှင့်အပွင့်အတွက်အမြင့်အနည်းငယ်ခန့်န်းကျင်။ အလွတ်သဘောအိမ်တွင်းဥယျာဉ်များတွင် coreopsis, delphiniums သို့မဟုတ် peonies များဖြင့်စိုက်လေ့ရှိသည်။
ကောင်းသောကြည့်ရှုပြီးအလားတူကြီးထွားလာသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှင်သန်ကြီးထွားသည့်အခြားအပင်များတွင်ဥရောပပညာရှိ၊ ဂျူပီတာ၏မုတ်ဆိတ်၊ ယိုရို၊ သိုးသငယ်၏နားနှင့်ဘိန်းမတူတို့ပါဝင်သည်။
ပထမအကြိမ်ပွင့်လန်းမှုလွန်သွားပြီးမှေးမှိန်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏စက်ရုံကိုသုံးပုံတစ်ပုံဖြင့်ပြန်လည်ချုံ့ပါ။ ၎င်းသည်ကြီးထွားမှုအသစ်ကိုအားပေးလိမ့်မည်။ များသောအားဖြင့်နွေရာသီနှောင်းပိုင်းတွင်ဒုတိယအပွင့်ပွင့်လာသည်။ ၎င်းသည်သူ့ဟာသူထပ်ခါထပ်ခါပွင့်နိုင်သည်၊ သို့သော်ဤလှည့်ကွက်သည်သင့်အားနွေ ဦး ကဲ့သို့ပန်းပွင့်များပေးလေ့ရှိသည်။
သငျသညျစက်ရုံရဲ့ခြုံငုံအရွယ်အစားဆံ့နှင့်ပြန့်နှံ့ထက်ဖြူဖို့ကစည်းရုံးသိမ်းသွင်းချင်လျှင်, အနည်းငယ်လက်မအမြင့်ရဲ့အခါနွေ ဦး အတွက်အသစ်သောတိုးတက်မှုနှုန်းအချို့ပြန် pinch ။
တစ်နေရာရာ၌ကြောင်များ၏ ၆၀ မှ ၈၀% ကြား၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ဥယျာဉ်၌သင်၏အိမ်နီးချင်း၏ Tomcat သည်ပျော်ရွှင်စွာပျံ့နှံ့နေသည်၊ ကြောင်များကိုဖမ်းဆီးနိုင်သည့်အခြားတုံ့ပြန်မှုများမှာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအသံထွက်ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်စကားအသုံးအနှုန်း၊ ရုတ်တရက်ခုန်ချခြင်း၊ ခုန်ခြင်း၊
သင့်ကြောင်အပေါ် catmint ၏သက်ရောက်မှုသည် ၁၀ မိနစ်မှ ၁၅ မိနစ်သာကြာမြင့်ပြီးထိုအချိန်တွင်တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသော olfactory gland များမီးလောင်လိမ့်မည်။ သူတို့ရဲ့နှာခေါင်းကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့နာရီဝက်လောက်ကြာနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ကြောင်ကပျော်စရာကောင်းလာရင်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းချက်ချင်းပြန်မသွားတော့ဘူး။
အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများထုတ်လုပ်သောအခြားကြောင်နှင့်အဆင်ပြေသောအပင်များနှင့်နီပါတတီယာမျိုးကိုစိုက်ပျိုးပါ။ ဥပမာအချို့မှာ Tatarian honeysuckle (Lonicera tatarica), lemongrass (Cymbopogon citratus), ကြောင်ချိုင်းမျိုး (Teucrium marum) နှင့် silvervine (Actinidia polygama) တို့ဖြစ်သည်။ Valerian root (Valeriana officinalis) သည်ခြောက်သွေ့သောအခါ catnip ကဲ့သို့သောပုံစံဖြင့်အလုပ်လုပ်သောကြောင့်ကြောင်ဥယျာဉ်ပတ်လည်၌ခြောက်သွေ့သော valerian အမြစ်ကိုဖြန်းခြင်းသည်လည်းသူတို့ကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။
သင်သည်သင်၏ကြောင်အတွက်အရွက်များကိုရိတ်သိမ်းလိုပါကပန်းပွင့်သောအခါအပင်ရှိ nepetalactone အဆင့်သည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ အရွက်များ၊ ပန်းများနှင့်ပင်စည်အားလုံးသည်သင်၏ကြောင်အတွက်လုံခြုံသည်။ သစ်ရွက်တစ်ပွင့်နှင့်ပန်းတစ်ပွင့်ပတ်ပတ်လည်တွင်ကြိုးတစ်ချောင်းကိုလုံလုံခြုံခြုံချည်နှောင်ပါ၊ ပြီးလျှင်သူတို့ကိုကြိုးအောက်တွင်ဖြတ်ပါ။ အရွက်များကိုအေးမြ။ မှောင်မိုက်သောနေရာတွင်ကြောင်များမရောက်နိုင်သည့်ဗီရိုကဲ့သို့ဆွဲထားပါ။
သငျသညျကိုလည်းဖြစ်စေသုံးပြီး dehydrate နိုင်ပါတယ် အစားအစာ dehydrator ဒါမှမဟုတ်မီးဖို။ သင်ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းကိုအသုံးပြုပါကဆေးခြောက်ရန်အတွက်ထုတ်လုပ်သူ၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပါ။ မီးဖို၌ထိုသို့ပြုလုပ်နေပါကအနိမ့်ဆုံးအခြေအနေတွင်မီးဖိုကိုထားပါ။ သင်၏အရွက်များ၊ ပန်းပွင့်များကို cookie စာရွက်ပေါ်တွင်ဖြန့်ပြီး၎င်းကိုထည့်ပါ။ အမှုန်အမွှားမှလွတ်မြောက်ရန်အက်ကြောင်းဖွင့်ထားရန်အတွက်မီးဖိုတံခါးဝတွင်တစ်ခုခုထားပါ။ ပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။
၎င်းသည်ခြောက်သွေ့။ crumbly ဖြစ်သည့်အခါ၎င်းသည်လုံလုံခြုံခြုံ Ziploc အိတ်ထဲတွင်သိုလှောင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏ feline သူငယ်ချင်းများအတွက်လတ်ဆတ်စေရန်အခြောက်လှန်းထားသောအပင်ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိုလှောင်ထားနိုင်သည်။
အပျော်တမ်းအနေဖြင့်အများဆုံးတွေ့ရသောပိုးမွှားများသည်ကြောင်များဖြစ်သည်။ အသစ်ပြုပြင်ထားသောသစ်ပင်များသည်ကြောင်များအားပြုပြင်ချိန်အတွင်းကြောင်များကိုဝေးဝေးရှောင်ရန်မျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်အဖုံးအချို့ပေးသင့်ပြီးနင်းနယ်နေသည့်အရွက်များ၏အနံ့သည်ကြောင်များအားလုံးကိုသင်၏ခြံထဲသို့ခေါ်ဆောင်လာလိမ့်မည်။ nepeta cataria နှင့်ပတ်သက်သောရှေးဟောင်းစကားတစ်ခွန်းရှိပါသည်။
'သင်သတ်မှတ်ထားလျှင်, ကြောင်စားလိမ့်မည်။ မျိုးစေ့ကြဲလျှင်ကြောင်များသည်မသိကြပါ။
များစွာသောအတွေ့အကြုံရှိဥယျာဉ်မှူးများအတွက်မှန်ကန်ပုံရသည် - ၎င်းတို့သည်ကြဲခြင်းဖြင့်အပင်ပေါက်စဉ်ကိုမတွေ့ရသောကြောင့်ကြက်များသည်တိုက်ရိုက်စိုက်သည့်အပင်များကိုလျင်မြန်စွာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်အတူပြissuesနာနည်းပါးသည်။
အခြားဥယျာဉ်ပိုးမွှားအများစုသည် catmint ကိုလုံးဝစိတ်မ ၀ င်စားကြပါ။ အမှန်မှာ voles, ယုန်များနှင့်ပိုးဟပ်များနှင့်ခြင်များပင်လျှင်၎င်းအားတွန်းလှန်နိုင်ပုံရသည်။ ဒါဟာပင်သမင်ခံနိုင်ရည်ပဲ!
အလားတူပင်၎င်းသည်မည်သည့်ရောဂါမျိုးကိုမဆိုအလွန်ခဲယဉ်းသည်။ ဒါဟာအနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါသည် အရွက်အစက်အပြောက်အမျိုးအစားများ , ဒါပေမယ့်ပင်ကြောင်းအဆန်းပါပဲ။
Q: Catmint နှစ်ပတ်လည်သို့မဟုတ်နှစ်ရှည်လား?
A: အများအားဖြင့်၎င်းသည်အမြစ်ဖွဲ့စည်းပုံကောင်းကောင်းဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပြီးဆောင်း ဦး နှောင်းပိုင်းတွင်ကောင်းမွန်စွာအသံထွက်နိုင်သရွေ့၎င်းသည်အများအားဖြင့်နှစ်ရှည်ပင်ဖြစ်သည်။ သင်တစ် ဦး သည်အလွန်အေးသောရာသီဥတုတွင်ရောက်နေပါက၎င်းကိုဆောင်းတွင်းအတွက်အိမ်တွင်းသို့ယူဆောင်လာရန်လိုလိမ့်မည်။
Q: ကြောင်တွေလိုပဲလူသားတွေ catnip ကိုတုံ့ပြန်သလား။
ဖြေ။ ။ ကြောင်တွေကိုပျော်ရွှင်ပြီးပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောစိတ်ပြင်းပြမှုဆီသို့ပို့နေစဉ်မှာပင်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များသည်လူများကို Diureticic အဖြစ်အသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်အာရုံကြောများကိုသက်သာစေရန်အကြံပြုသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်မှတ်တမ်းတွင်မဆိုနောက်ဆုံးပေါ်ရလဒ်ရှိမရှိဆိုသည်ကိုသင်၏ဒေသခံဆေးဖက်ဝင်ဆရာ ၀ န်သို့မဟုတ်ဆရာဝန်ကိုမေးမြန်းသည့်မေးခွန်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်လူသားများတွင်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည်ဟုမယူမှတ်ဘဲလူတို့သည်ရံဖန်ရံခါအစားအစာသို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည်ဖြင့်အစားထိုးအသုံးပြုသည်။
သူများသည်လေးခုမျိုးကွဲဖြစ်ကြသည် 'Walker's Low' , 'Six Hills Giant' , 'Joanna Reed' နှင့် 'Select Blue' အထက်ဖော်ပြပါအမျိုးအစားများတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ချီကာဂိုရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်သည်နီပါတာမျိုးစိတ်များကိုလေ့လာခဲ့ပြီး ၄ င်းတို့အားလုံးကိုကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။ ဝမ်းသာစရာကအားလုံးလူကြိုက်များပြီးမင်းရဲ့ဥယျာဉ်စင်တာမှာအလွယ်တကူတွေ့နိုင်တယ်။
အပင်ပေါ် aphids ဖယ်ရှားပစ်ရဖို့ကိုဘယ်လို